ဟိုတယ်မှာ တနေ့တာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ဟိုတယ်မှာ တနေ့တာ…
Posted by johnnydeer on Feb 22, 2013 in Short Story |7comments
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ….အခန်းဈေးနှုန်းတွေက နှစ်ယောက်ခန်းက သုံးမျိုးရှိပါတယ်…***…***…***ပါ…သုံးယောက်ခန်းက နှစ်မျိုးရှိပါတယ်…***…***ပါ….လေးယောက်ခန်းကတော့ ***ပါ…ခြောက်ယောက်ခန်းက***ပါခင်ဗျ…
အေး…ငါတို့က ဟိုဘက်….ဟိုတယ်မှာ တည်းနေကျ..
အဲ့ဒီမှာ မရလို့ မင်းတို့ဆီ လှမ်းမေးတာ…ဘော်ဒါတစ်ယောက်က ဖုန်းနံပတ်ပေးလို့…နှစ်ယောက်ခန်း ၁၅ ခန်းလောက် ယူမယ်…ဘယ်လောက်လျှော့ပေးမလဲ…
ဟုတ်ကဲ့…Group တွေ..ရက်ရှည်တည်းတဲ့ သူတွေအတွက် ဆယ်ခန်းတစ်ခန်း…ဆယ်ရက်တစ်ရက် လျှော့ပေးပါတယ်ခင်ဗျ…
ပြီးတော့ တည်းတဲ့သူတွေက အစည်းအဝေးလုပ်မယ်…BALL ROOM ကို တနေကုန်သုံးချင်တယ်…
ဟုတ်ကဲ့…BALL ROOM က သုံးနာရီတဆက်ရှင်ကို *** ယူတာပါခင်ဗျ…တည်းခိုတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေအောင် ဈေးနှုန်းကို စီစဉ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ….
မဟုတ်ဘူးကွ…ဟိုဘက်ဟိုတယ်ကဆို ခန်းမအတွက် ပိုက်ဆံမယူဘူးကွ… FREE ပဲ…
ရမှာလား…အခန်းခကော ထပ်လျှော့ပေးနိုင်သေးလား…MEETING ROOM ကကော FREE လုပ်ပေးနိုင်သလား…
ဘော်ဒါတစ်ယောက် ဖုန်းနံပတ်ပေးလို့သာ လှမ်းဆက်လိုက်တာပါကွာ…ဟိုတယ်က ကောင်းလားမသိ…မကောင်းလားမသိ…
ချစ်ကလဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ…အခန်းတွေ ကောင်းသားပဲကို…
သွားပါစို့…ကိုကိုရာ…လမ်းထောင့်က မော်တော်ပီကယ်က ခရာပဲ မှုတ်နေတာ…ချစ်က အဲ့ဒီခရာသံ မခံနိုင်ဘူး…
မဟုတ်ဘူး…ခင်ဗျ…မော်တော်ပီကယ်က ကျောင်းဆင်းကျောင်းတက်ချိန်မို့လို့ မှုတ်တာပါ…ခဏနေ မမှုတ်တော့ပါဘူး…
တော်ပြီကိုကို…ကို့ကို့ဘာသာ တည်းချင်ရင် ကိုကိုနေခဲ့တော့ ချစ်ကတော့ သွားပြီ….
ည တစ်နာရီခွဲ ခန့်…
ဒုန်း…ဖတ်…ဖတ်…ဖတ်…ဖတ်..ဟောဟဲ…ဟောဟဲ…(အခန်းတခါးဖွင့် ရှာဝါဖိနပ်ဖြင့် အမောတကော ပြေးလာသံ)
အခန်းထဲကို မျက်နှာကြီးတစ်ခု ၀င်လာလို့…
ခင်ဗျာ…ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်က ဆောက်တာ သုံးနှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်…အသစ်ဗျ…သရဲမရှိပါဘူးခင်ဗျ…
သရဲ မဟုတ်ဘူး…လူ…လူ…လူမျက်နှာကြီး ၀င်လာတာရှင့်…လိုက်ကြည့်ဦး…
အမတို့ စိတ်ခြောက်ခြားပြီးအိမ်မက်ယောင်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ…ဒီမှာ ပြတင်းပေါက်တွေက အကုန် ပိတ်ထားပါတယ်…အဲ့ဒီတခါးနောက်မှာ သံပန်းတွေရှိပါတယ်…အဲ့ဒီနောက် ခြင်လုံဇကာ ရှိပါတယ်…အဲ့ဒီနောက် ခန်းဆီးရှိပါတယ်…လူတစ်ယောက်ဟာ ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့် သံပန်းကြားထဲကနေ လက်နှိုက်ပြီးဖွင့်ရင်တောင် ခြင်လုံဇကာ ကျန်ပါသေးတယ်…ခြင်လုံဇကာကော တွန်းဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုရင် ခြင်လုံဇကာ က အတွင်းဖွင့် လုပ်ထားလို့ ခန်းဆီးနဲ့ ညိပြီး ဘယ်လိုမှ ဖွင့်မရပါဘူး…မယုံရင် အမ အပြင်ကနေ ကြိုက်သလိုဖွင့်ပါ…အပြင်မှာလဲ လုံခြုံရေးတွေရှိပါတယ်…ဘယ်လိုမှ မျက်နှာကြီး ၀င်လာစရာမရှိပါဘူး…အမ အိပ်ပျော်နေရင်း လန့်သွားတာနေမှာပါခင်ဗျာ….
တော်ပြီ…မင်းတို့ ဟိုတယ် မလုံခြုံဘူး…မနက်ကျမှ မန်နေဂျာကော…ပိုင်ရှင်ကော တိုင်ဦးမယ်…
အကို အခန်း ***ကပါ…
အရင်တပတ်လောက်က အကိုတို့လင်မယား ဒီမှာ တည်းသွားသေးတယ်…
အဲ့ဒီတုန်းက အကိုတို့ BREAKFAST စားမသွားဘူး…အဲ့ဒီအစား အပြင်က အကိုတို့ကိုလာကြိုတဲ့ တပည့်နှစ်ယောက်ကို ကျွေးလိုက်စမ်းပါ…အကိုတို့ကတော့ စားပြီးပြီ…
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ တစ်နေ့တာ ပျော်စရာလေးတွေပေါ့။
ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေကတော့ အနည်းနဲ့အများ
ဟိုတယ်မှာ သရဲ အခြောက်ခံရဖူးပါတယ်..
အဲ့လိုတော့ ပြသနာ မရှာဖြစ်ဘူး..
ဒီတိုင်းပဲ ပြီးတော့လည်း ပြီးတာပါပဲ ဆိုပြီး နေလိုက်တယ်..
အဲ့လို တည်းခိုသူတွေ ရှိနေရင် သိကြမှာတောင် မဟုတ်ဘူး။
ပြည်သွားတုန်းက တခါ.. ည ၁၂ကျော် ကတည်းက တခန်းလုံး အခန်းနံရံကို လိုက်ထုတာ.. မနက် ၄နာရီလောက် အလန်းပေးပြီး ထ တော့ ဆက် မထုတော့ဘူး။
ကိုရီးယားမှာတုန်းကလည်း ဟိုတယ် အသစ်ကြီး အထပ်မြင့်တွေက မပြီးသေးဘူး ပြုပြင်တုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ လူများလွန်းလို့ အဲ့ဒိ ဘက်မှာ ထားတာ ပြောတာပဲ.. တညလုံး ဆူညံ့ပြီး ကိုရိးယားလို စကားတွေ အော်ဟစ်ပြောနေတာ ဟိုဘက်ခန်းက လိုလို ဒီဘက် ခန်းကလိုလို နဲ့.. မနက် မိုးလင်း ဘေးအခန်းက လူက ကိုယ့်လူတွေ ဖြစ်နေတော့ မေးကြည့်တော့.. သူတို့ကလည်း ကိုယ့်အခန်းက ထင်လို့တဲ့.. အခန်းတံခါး ဖွင့်ကြည့်တဲ့ လူကလည်း ဘာမှ မတွေ့ဘူးတဲ့..
ပုဂံမှာလည်း အဲ့လိုပဲ.. ခရီးသွား ရာသီ မီးမပျက်ဘူး ဆိုပေမဲ့.. မီးပျက်တဲ့ နေ့ရောက်သွားတာ တညလုံး ပူပူ အိုက်အိုက်နဲ့ အိပ်မပျော်လို့ ငုတ်ထုတ် ထိုင်နေတာ မှေးခနဲ ဖြစ်သွားတော့ အိပ်ပျော်ပြီလား ဆိုပြီး လာမေးတယ်။ စသဖြင့် စသဖြင့်..
ပြီးခဲ့တဲ့ တခေါက် ပြည်သွားတုန်းကလည်း အုပ်စုနဲ့ သွားတာမို့သာ တည်းလိုက်တာ.. တညလုံး အိပ်လို့တောင် မရဘူး။ ကုတင်က နဲ့နေတာနဲ့ တချိန်ကုန် လှုပ်လှုပ်လာလို့.. ခြင်ကလည်း လာလာ ၀ိုင်းလို့..
ပုဂံ ခရီးသွားရာသီ မီး မပျက်ဘူးဆိုတာ ယုံတမ်းစကားဖြစ်သွားတာ ကြာပေါ့ .. (၀မ့်စအပွန်းအေတိုင်း ကတော့ ဟုတ်တယ်)
မဆူး ဆီ က အဲ့ဒီ့ အတွေ့ အကြုံ တွေနဲ့ တိုးရောင်းစားပါလားဟင် .. သရဲ အခြောက်ခံ ချင်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုပေါ့ …ဘစ် ဘိဇနပ် နော် ..
မြန်မာပြည်မှာလဲ list လုပ်ရအောင် .. :hee:
ပြည်တွင်းမှာ ၃ခု ပြည်ပ မှာ ၁ခု ကြုံဖူးပါတယ်။
ပြည်မှာ ၂ခါ.. ဟိုတယ် မတူဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ အမိန့်ရှိပါ ခင်ဗျ
အကိုက **** အခန်းကပါ
အကိုတို့က မနက်ဖြန်မနက်စောစော ခရီးဆက်မှာဆိုတော့ အခန်းခက နေ့လည် ၁၂ ထိနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး ပေးရတာလေ၊ အခန်းသော့ကို အဲဒီ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ထိုးခါနီးမှ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပို့ခိုင်းလိုက်မယ်နော် ရတယ်မလား…….
ဧည့်သည်တွေက အဆောက်အဦးကြီးကြီးတွေ့ရင် အလိုလိုကို စိတ်ချောက်ခြားပြီး ဟိုထင်ဒီထင်တွေ ထင်တတ်ကြပါတယ်…တခါကလဲ ယောက်ကျားလေး ၄ ယောက်…မိန်းကလေး ၄ ယောက်တဖွဲ့လာတည်းပါတယ်…လာစဉ်ကတည်းက ယောက်ကျားလေးတွေက လမ်းတလျှောက်လုံး သရဲတွေ အကြောင်းပြောပြီးခြောက်လာကြတယ်…ပြီးတော့ ညရောက်တော့လဲ သူတို့အဖွဲ့လိုက်ကြီး မိန်းကလေးတွေအခန်းကို နည်းမျိုးစုံ လိုက် ခြောက်ပြီး စကြတယ်…တဖွဲ့ထဲ ဆိုတော့ ဟိုတယ်အနေနဲ့ကျတော့ ပြောမကောင်းပြန်ဘူး…မနက်ကျတော့ ကောင်မလေးတွေက ဟိုတယ်ပဲ သရဲခြောက်လို့ မအိပ်ရဘူး…လာပြောကြတယ်…ပြောချင်တော့ပါဘူး…လူစုံမှ တကယ့် လူစုံ…
လူအမျိုးမျိုးပုံစံအစုံစုံ ဆက်ဆံရတဲ့ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းဘွ